ငွေကြေးမပြည့်စုံခဲ့တဲ့ ငယ်ဘဝမှ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများအဖြစ်သို့ | News Bar Myanmar
ငွေကြေးမပြည့်စုံခဲ့တဲ့ ငယ်ဘဝမှ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများအဖြစ်သို့
K-Pop idol တိုင်း ရွှေဇွန်းကိုက်ပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တချိန်က အချို့ဟာ အစားအသောက်အတွက်တောင် ရုန်းကန်လုပ်ရှားခဲ့ရသူများ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဘဝကနေ ခုတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး ပြည့်စုံတဲ့ ဘဝကို ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ကြရလဲဆိုတာတော့ မတွေးနိုင်အောင်ပါပဲ။
1. Yunho (TVXQ!)
Yunho ကတော့ ခုအချိန်မှာ Kpop လှိုင်းရဲ့ စတင်သူများထဲမှ တစ်ယောက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရပြီး အားကျရတဲ့ စီနီယာတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပီ။ သို့သော် ငယ်စဉ်ဘဝက မိသားစုဟာ ငွေကြေးအခက်အခဲပေါင်း များစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သားကြီးဖြစ်တဲ့ Yunho ဟာ မိသားစုနဲ့ ညီမလေးကို ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်ရှိခဲ့တဲ့ Yunho ကို ဖခင်ဖြစ်သူမှ ငွေကြေးဖြတ်တောက်ခဲ့တဲ့အတွက် Yunho ဟာ သတ္တိရှိစွာပဲ အိပ်မက်အတွက် ဆိုလ်း မြို့ကို တက်ခဲ့ပါတယ်။ ရထားဘူတာတွေမှာ အိပ်ရင်း အအေးဒဏ်ကာကွယ်ရန် သတင်းစာကို စောင်အဖြစ်အသုံးပြုပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ညတွေတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။
2. Dara ( 2NE1)
Dara ဟာ တခါက ပရိသတ်တွေကို သူမရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်း ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ ငယ်ဘဝက သူမရဲ့ဖခင်ရဲ့ စီးပွါးရေးဟာ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တခါက အဘွားအိမ်သွားဖို့အတွက် ဘတ်(စ်) ကားတောင် မစီးဘဲ လမ်းလျှောက်ပြီးလည်း သွားခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။
မိသားစုဟာလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အိပ်မက်အတွက် အမိမြေ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး YG Entertainment မှာ 2NE1 အဖွဲ့အဖြစ် လှုပ်ရှားရင်း အောင်မြင်မှုများစွာ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
IU ဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး အဆိုရှင်ထဲက တစ်ယောက်ပါ။ သို့သော် အဆိုတော်မဖြစ်ခင် ငယ်ဘဝမှာတော့ မိသားစုဟာ အကြွေးများကြားမှာ နေခဲ့ရဖူးပါတယ်တဲ့။ ဒါ့ကြောင့် မိဘနှစ်ပါး အလုပ်လုပ်နေစဉ် ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အိမ်မှာလည်း နေခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တော့ အဘွားဖြစ်သူနဲ့အတူ ပိုးဟပ်တွေရှိတဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်အတွက် ကြိုးစားစဉ်မှာတောင် ဆွေမျိုးများရဲ့ လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုပါ ခံခဲ့ရပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာတော့ BTS အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာကျော် အဖွဲ့တစ်ခုပါ။ သို့သော် အဖွဲ့ဝင်အချို့ရဲ့ ငယ်ဘဝကတော့ ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Suga ရဲ့ မိသားစုဟာ မပြည့်စုံခဲ့ပါဘူး။
အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝက အစားအသောက်နဲ့ လမ်းစရိတ်ထဲက တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ သို့သော်လည်း ယခုအခါမှာတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ BTS ရဲ့ Suga အဖြစ်ရပ်တည်နေပါပီ။
5. Go Hara
ကွယ်လွန်သွားလေပြီ ဖြစ်တဲ့ Go Hara ဟာလည်း ငယ်ဘဝကပန်းခင်းလမ်းကို လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငယ်စဉ်က ကွဲကွာသွားခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ Go Hara နဲ့ သူမရဲ့ အစ်ကိုကို အဒေါ်ဖြစ်သူထံ စောင့်ရှောက်ဖို့ အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာလောကထဲရောက်လာပြီးတဲ့နောက်တော့ Go Hara ရဲ့ အဖွဲ့ Kara ဟာ ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာသာမက နိုင်ငံတကာမှာပါ အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ချမ်းသာ အောင်မြင်တဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Source: SCMP Style
Next 'We Got Married' သမိုင်းတစ်လျှောက် ပရိတ်သတ်တွေ သဘောအတူဆုံး စုံတွဲများ »
Previous « Vocal အားနည်းသည်ဆို၍ ဝေဖန်ခံရသော Kpop Idol များ